अभियन्ता संग्रौलालले ‘सरुवा गराइदिने’ चेतावनी दिएका असईकाे सरुवा - Kantipath.com
पछिल्लाे सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । घटना झण्डै एक महिनाअघिको हो । समाजमा अभियन्ता भनेर चिनिने ज्वाला संग्रौलाले बर्दीमा रहेका प्रहरीलाई प्रहरी चौकीभित्रै थर्काएको सुनिन्छ । उनले एक असईलाई ‘एनि हाउ’ सरुवा गराइदिने चेतावनी दिएकी छन् । र, ती असईको साँच्चिकै सरुवा भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्का स्टाटस लेखेर ‘भाइरल’ र केही समय अघि रकम असुली धन्दाका रूपमा पनि आरोपमा मुछिएकी
उनी अहिले विभिन्न स्थानमा राहत वितरणमा व्यस्त छिन् ।
राहत बाँड्न जाने सिलसिलामा महाराजगञ्जमा उनको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झासँग लफडा भएको थियो ।
भिडियाे : Online News बाट साभार !
अनि अर्का व्यक्तिले असइको नाम सोध्छन् । नाम मणिकान्त झा भनेपछि उनी भन्छन्, ‘झा जी रैछौ, उतै मधेसतिर जाउ अब ।
आफ्नै घरतिर सजिलो पनि हुन्छ । खेतिकिसानी गरेर खाउ ।’
Previous Previous post: योगेशले शेयर गरेको किर्ते विज्ञप्ति झलनाथ खनालको नामबाट कसले निकाल्यो ?
Next Next post: फोनबाटै ज्ञानेन्द्र शाहीले अपशब्द प्रयोग गर्दै पत्रकारलाई धम्क्याएकोप्रति महासंघको आपत्ति